Hub cusub oo loogu talagalay albaabbada birta ah iyo mashiinka goynta leysarka birta ee birta ah
waxaa maamula 20-08-31
Albaabada iyo daaqadaha birta ah ee caadiga ah waa qabow oo caajis. Waxyaalaha godan ee leysarka ayaa lagu dhex daray qurxinta qaab dhismeedka, taas oo ka dhigaysa albaabada iyo daaqadaha inay noqdaan kuwo is beddelaya, oo dadka siinaya dareen raaxo leh! Mashiinka jarista birta birta ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa warshadaha wax soo saarka birta ...
Sida loo gaaro mashiinka goynta laser-ka oo diiradda saaraya, 50% isticmaaleyaashu ma oga!
Sidaan wada ognahay, mashiinka goynta laser-ka wuxuu leeyahay faa iidadan aan la jaan qaadi karin jarista xaashiyaha birta. Kaliya ma leh saxitaanka goynta sare, laakiin sidoo kale waxay leedahay qeyb iskutallaab ah oo siman oo aan wax xabad lahayn. Waxay ku guuleysan kartaa natiijooyin wanaagsan haddii ay goyneyso saxan qaro weyn ama saxan khafiif ah, saameyntani dhammaantood waxay leeyihiin laser c ...
Xirfadda khiyaanada ah ee loo adeegsado Mashiinka goynta Dabka
Mashiinka jarista ololka birtu wuxuu leeyahay karti dhumuc weyn oo birta birta ah, kharashka goynta hooseeya, codsigu wuxuu inta badan ku eg yahay birta kaarboon, goynta xajmiga qaro weyn, Shandong Buluoer Intelligent Technology Co., Ltd. waa mashiinka mashiinka goynta plasma ee CNC, Mashiinka jarista ololka CNC. D ...
Ma fahantay xeerarka hawlgalka ee mashiinka goynta birta ololisa
Mashiinnada jarista ololka birtu waxay leeyihiin dhumuc weyn oo ah awoodda jarista birta kaarboon, kharashka goynta ayaa yar, sidaa darteed waxaa soo dhoweeyay soo saarayaasha wax soo saarka birta badan. Shandong Buluoer wuxuu ku takhasusay R&D, wax soo saarka, iibka iyo adeegga qalabka goynta laser, qalabka alxanka, CNC ...
Taxaddarrada marka mashiinka goynta leysku jaray birta xaashida
Markaad isticmaaleyso qalabka mashiinka goynta laser, dusha sare ee goynta u dhow diiradda waa mid iska caadi ah. Ma ogtahay sida diirada loo saarayo mashiinka goynta leysku? Tallaabada ugu horreysa ee goynta waa in la helo meel wanaagsan oo ahmiyadda la saaro, taas oo ah mowduuc uu qof walba aad uga walaacsan yahay. Marka hore ...